Warbaahinta Kismaayo24.com » Alaha u naxariste Ugaas Cabdulaahi Ganeey oo ku geeriyooday Cabudwaaq iyo Tacsi lo diraayo.
Alaha u naxariste Ugaas Cabdulaahi Ganeey oo ku geeriyooday Cabudwaaq iyo Tacsi lo diraayo.
March 14, 2013 - Written by admin - Edited byadmin Alaha u naxariste Waxaa Magaalada Cabudwaaq ee Bartamaha Somali ku geeriyooday Ugas C/laahi Maxamuud Faarax (Cabdulaahi Ganeey ) oo ka midn ahaa Dhaqanka Waqooyiga Gobolka Galgaduud,
Waxaa Halkaan Tacsi tiiranyo leh uga diraya Ganacsade Baban Farax Dhere Nabadoon c/lahi ali qanaanuf eng bashiir sheikh axmed eng xasan cabdi kaynan, eng xasan c/lahi diriye, Dr daud lugasan sh guhaad cali mire, Sh farax mire rooble, Sh cabdi-iraad xirsi cali, mahad daahir xuubeey abdiraxman xaashi diriye, iyo ridwaan diiriye maxamed waxaanu tacsi u diraynaa eheladi qarabadi iyo asxabti c/laahi maxamuud faarax (cabdulaahi ganeey ) oo ku geeriyooday deg cabudwaaq
Waxaanu leenahay ilahay Janadi Fardowso haka waraabiyo Qoyski iyo qaraabadi uu ka baxayna Samir iyo Imaan Alaha Ka siiyo Amin Amin Amin
Halkan ka dhiibo Aragtidaada adigo Anshaxa K24 ilaalinaya 3 Responses to Alaha u naxariste Ugaas Cabdulaahi Ganeey oo ku geeriyooday Cabudwaaq iyo Tacsi lo diraayo.
Bashiir Ali Godane says:	March 14, 2013 at 7:48 pm	inaa li’laahi wa inaa ileehi raajacuun Allah ha u naxariisto marxuumka samir iyo iimam Allah ha ka siiyo qooska uu ka geeriyooday iyo reer Caabudwaaq oo dhan meel walba ooy joogaan. nin aad iyo aad u sharaf badan ayuu ahaa qoos sharaf lehna wuu ka dhashay. Allah ha u naxariisto
wiil sade says:	March 15, 2013 at 3:38 pm	ilaahay ha u naxariisto ugaasku runtii wuxuu ahaa nin qaaliya oo laga tabi doono c/waaq iyo balanbale iyo dhamaan dhulkaas oo odayga ka aha.
Abdirashid Guled Abdirashid Kismaanyo says:	March 23, 2013 at 9:38 pm	Inaa lilaahi wa inaa ileehi raajicuun ilaahey ha unaxariisto marxuum ,janatul fardowsna ha kawaraabiyo ,Samir Iyo iimaan ha kasiiyo qoskii Iyo qaraabadii uu ka tagey ,Qofkasta waa dhadhamin modka ee Allow jidka saxda nagu toosi
Dhagayso:- Taliska Ciidamadda dowladda ee Jubbooyinka oo ka hadlay dhaawacii Coll Yaasiin RaadeerJune 19, 2013
Dhagayso:- War kasoo baxay Al-shabaab oo Dowladdu BeeniyayJune 19, 2013